ပျောက်သွားတဲ့ဖိုင်တွေကိုဘယ်လိုပြန်လည်ရယူမလဲဆိုတာ flash drive ကိုဖွင့်လို့မရဘူး-Airy data recovery
111 2021-05-02 13:58
Flash drive ကိုဖွင့်မရနိုင်သည့်အကြောင်းရင်းများစွာရှိသည်။ ဖြစ်နိုင်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုတစ် ဦး တည်းသာစမ်းသပ်နိုင်သည်။ သို့သော်ပြtheနာ၏အရင်းအမြစ်ကိုရှာတွေ့လျှင်ပြsolveနာကိုဖြေရှင်းရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ အောက်ပါအယ်ဒီတာကပြdriveနာကိုမဖွင့်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းအနည်းငယ်ပေးပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်လူတိုင်းအတွက်အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာသည် flash drive တွင်တပ်ဆင်ထားသော်လည်း Flash drive ကိုဖွင့ ်၍ မရပါကဤအချိန်တွင်ထိတ်လန့်ခြင်းမရှိကြပါနှင့်။ flash drive မဖွင့်နိုင်ပါကကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
ကွန်ပျူတာသည် flash drive ကိုမဖွင့်နိုင်သည့်ပြtheနာကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုသင်ပေးပါ။
Flash drive ကို Right-click နှိပ်ပြီး Properties ကိုနှိပ်ပါ။ Pop-up properties window တွင် Tools-Start Check ကိုနှိပ်ပါ။ Flash drive ကိုဖွင့ ်၍ မရသောအဓိကအကြောင်းပြချက်မှာ file system ပျက်စီးခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းအတွက်ပုံမှန်နည်းလမ်းမှာ disk ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ဖြစ်သည်။ "Removable Disk" ကိုညာဖက်နှိပ်ပြီး pop-up context menu မှ "Properties" ကိုရွေးချယ်ပါ။
ထို့နောက်ဖွင့်ထားသော ၀ င်းဒိုးရှိ“ Tools” tab သို့ပြောင်းပါ၊ “ Error Check Start Check” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ နှစ်မျိုးစလုံးကို pop-up ၀ င်းဒိုးတွင်စစ်ဆေးပါ၊ နောက်ဆုံးတွင်“ Start” ခလုတ်ကို နှိပ်၍ အမှားများကိုစစ်ဆေး။ ပြုပြင်ရန်။
ပြုပြင်ပြီးသည်နှင့်သင် flash drive ကိုဖွင့်ရန်ကြိုးစားနိုင်သည်။
အထက်ပါနည်းလမ်းသည် flash drive ကိုဖွင့်ရန်ပျက်ကွက်ပါက၊ flash drive ကို format လုပ်ရန်အကြံပြုသည်။ "Removable Disk" ကို Right-click နှိပ်ပြီး Pop-up တွင် "Format" ကိုနှိပ်ပါ။ ဖွင့်လှစ်သော "Format" ဝင်းဒိုးတွင်, လျင်မြန်စွာ Format ကို uncheck နှင့် "Start" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
အထက်ဖော်ပြပါလုပ်ဆောင်မှုများကိုမကြာခဏပြုလုပ်ပြီးပါက၊ flash drive ကိုပုံမှန်ဖွင့ ်၍ မရပါက Flash drive ကို USB port တစ်ခုဖြင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ကွန်ပျူတာမိုဘိုင်းသိုလှောင်မှုနှင့်ဆက်စပ်သော setting ကိုရွေးချယ်စရာများ disable မဖြစ်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ သီးခြားကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ချိန်ညှိခြင်းနည်းလမ်းများ -“ Run” ပေးသည့်ဇယားကွက်ကိုဖွင့်ပြီး Group Policy Manager ထဲသို့ ၀ င်ရန်“ gpedit.msc” ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
Group Policy Manager ၀ င်းဒိုးတွင်၊ “ စီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံ” →“ စနစ်” →“ ဖယ်ရှားနိုင်သောသိုလှောင်မှုလက်လှမ်းကို” ကိုအသာပုတ်ပါ၊ ညာဘက်ရှိ "ဖယ်ရှားနိုင်သော disk: Deny Read Permission" နှင့် "All Removable Disk: Deny Read Permission" ကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။ "ဒီပစ္စည်းနှစ်ခုလုံးကို" Configured Not "(သို့)" Disabled "အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အကယ်၍ မဟုတ်ပါကသက်ဆိုင်သောအရာကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါ၊ pop-up window ရှိ "Disabled" item ကိုစစ်ဆေးပြီး "OK" ကိုနှိပ်ပါ။
အထက်ဖော်ပြပါနည်းလမ်းများအရ flash drive ကိုဖွင့ ်၍ မရပါကပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် Flash drive အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ခြင်းကိုသာသုံးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် flash drive ၏ဆုံးရှုံးမှုများကိုဖြေရှင်းရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာသည် flash drive တွင်တပ်ဆင်ထားသော်လည်း Flash drive ကိုဖွင့ ်၍ မရပါကဤအချိန်တွင်ထိတ်လန့်ခြင်းမရှိကြပါနှင့်။ flash drive မဖွင့်နိုင်ပါကကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ u Start သည်ကွန်ပျူတာကို flash drive မဖွင့်နိုင်သည့်ပြproblemနာကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုသင်ပေးသည်။
၁။ Flash Drive ကိုညာဖက်နှိပ်ပြီး Properties ကိုနှိပ်ပါ။ Pop-up Properties ၀ င်းဒိုးထဲက "Tools" - "Start Check" ကိုနှိပ်ပါ၊ pop-up ထဲက Check Disk ၀ င်းဒိုးထဲကရွေးစရာအားလုံးကိုစစ်ဆေးပြီး၊ Start မှာပြထားတဲ့အတိုင်း Start ကိုနှိပ်ပါ။ ပုံ
၂။ ဖွင့ ်၍ မရပါကိုကြည့်ရှုရန် flash drive ကိုဖွင့်ပါ။ ထို့နောက်အောက်ပါနည်းလမ်းအတိုင်းလိုက်လုပ်ပါ။ Run window ကိုဖွင့်ရန် win + r shortcut ခလုတ်ကို နှိပ်၍ gpedit.msc ကိုရိုက်ပါ။ flash drive
၃။ "Local Group Editor" တွင် "Management Module-System-Removable Storage Access" ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးလျှင်ညာဘက်ရှိစာရင်းထဲတွင် "Removable Disk: Deny Read Permission" နှင့် "All Removable Disks:" ကိုတွေ့ပါ။ permissions "အချက်နှစ်ချက်ကိုပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း - flash drive ရဲ့ home
အထက်ပါအချက်နှစ်ချက်ကိုအသီးသီးဖွင့်ပါ။ ၎င်းတို့၏ configuration ကို "unconfigured" သို့ "disable" အဖြစ်ပြောင်းပြီးပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း "OK" ကိုနှိပ်ပါ။
ကွန်ပျူတာသည် flash drive ကိုမဖွင့်နိုင်လျှင်အရေးမကြီးပါ။ ဖြေရှင်းနည်းများစွာရှိသည်။ အထက်ပါနည်းလမ်းနှစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုံနည်းလမ်းများဖြစ်သည်။ ပြင်ပပြုပြင်ရေးဆော့ဖ်ဝဲ၏အကူအညီမပါဘဲ၊ flash drive ကိုမဖွင့်နိုင်ပါကကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ Flash drive ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မလား? ဤဘုံနည်းလမ်းများကိုသာသုံးပါ။
သုံး: Flash Drive ကိုဖွင့ ်၍ မရပါ၊
flash drive၊ မိုဘိုင်း hard disk၊ SD ကဒ်စသည့်သိုလှောင်ရေးပစ္စည်းများကိုနှစ်ချက် နှိပ်၍ မဖွင့်နိုင်ပါ။ USB flash drive ထဲ၌အရေးကြီးသောဒေတာများသိမ်းဆည်းထားသဖြင့်ဒေတာများကိုအရံသိမ်းမထားပါကကျွန်ုပ်ကို format မလုပ်ဝံ့ပါကဘာလုပ်ရမည်နည်း။ ဒီအခြေအနေကိုမထိတ်လန့်ပါနဲ့၊ ဒီနေရာမှာ Flash Drive ပြtheနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာကိုသင်ပေးတဲ့အယ်ဒီတာသေးသေးလေးတစ်ခုကစိတ်ချရတဲ့ပုံစံကိုဖော်ထုတ်ဖို့ဖွင့်လို့မရပါဘူး။
Flash drive ကိုဖွင့ ်၍ မရပါ၊
Flash drive သည်အလွန်လူကြိုက်များသောဒေတာသိုလှောင်ရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အသွင်အပြင်ငယ်၊ သိုလှောင်မှုနေရာနှင့်လွယ်ကူသောသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူမှုတို့ကြောင့်၎င်းကိုလူကြိုက်များသောသိုလှောင်ရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ နေ့စဉ်ရုံးတွင်ဖြစ်စေ၊ နေ့စဉ်ဘ ၀ ၌ဖြစ်စေ Flash drive ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ Flash drive ကိုသာမန်အချိန်များတွင်မကြာခဏအသုံးပြုသောကြောင့်သုံးစွဲသူများသည် flash drive နှင့်သက်ဆိုင်သောပြproblemsနာအမျိုးမျိုးနှင့်ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ အသုံးအများဆုံးမှာ flash drive ကိုဖွင့ ်၍ မရပါ။
ကွန်ပျူတာ၏ USB port ထဲသို့ flash drive ကိုထည့်ပြီးနောက်ဖိုင်မန်နေဂျာကိုဖွင့်ပါ။ ၎င်းသည် flash drive ၏ drive အက္ခရာကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ အသုံးပြုသူသည် flash drive ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါက flash drive ကိုဖွင့်ရန်၊ ဖွင့်ပြီး၊ system က "drive K ရှိ disc ကိုမသုံးမီပုံစံချရန်လိုအပ်သည်။ သင်ကပုံစံချချင်သလား" သို့မဟုတ် "drive H ထဲရှိ disc ကို format မလုပ်ရ။ " ဟုဖော်ပြထားသော ၀ င်းဒိုးတစ်ခုပေါ်လာမည်။ အခုလား? "
ယခုအချိန်တွင်သင် "Format Disk" ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါကစနစ်သည်ပုံစံချသည့် ၀ င်းဒိုးတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဖိုင်စနစ်ရွေးချယ်ပြီးနောက် Flash drive ကို format လုပ်ရန်အိုကေကိုနှိပ်ပါ။ သို့သော် format ချခြင်းသည် flash drive တွင်အချက်အလက်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ flash drive ထဲရှိဒေတာသည်အရေးကြီးလျှင်၎င်းကို format မလုပ်ပါနှင့်။
Flash drive ကို format ချပြီးအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးပြုသူများသည်ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများကိုကြုံတွေ့ရသောကြောင့်အကြောင်းပြချက်များသည်အတူတူပင်မဟုတ်ပါ။ ဤနေရာတွင်အယ်ဒီတာသည်ရည်ညွှန်းရသည့်အကြောင်းရင်းအချို့ကိုဖော်ပြသည်။
Flash drive ပျက်နေတယ်၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ Flash drive ကျဆင်းသွားပြီးပုံမှန်အားဖြင့် Flash drive ကိုအသုံးမပြုနိုင်ပါက (သို့) Flash drive ၏မိတ္တူအရည်အသွေးသည်အရည်အချင်းမပြည့်မီပါ၊ ကွန်ပျူတာ၏ USB port မှာပြaနာရှိနေတယ်။ အချို့သောကွန်ပျူတာများတွင် USB port များမရှိခြင်း (သို့) power supply မလုံလောက်ခြင်း၊ ဥပမာအားဖြင့် flash drives ကဲ့သို့သောပြင်ပကိရိယာများကိုပုံမှန်အသုံးမပြုစေခြင်း။ ဤကိစ္စတွင် Flash Drive ကိုအခြားကွန်ပျူတာများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးစားနိုင်သည်။ ယာဉ်မောင်းနဲ့ပြaနာရှိနေတယ် အကယ်၍ ကွန်ပျူတာဒရိုင်ဘာသည်ပျက်စီးခြင်း (သို့) အသက်ကြီးလွန်းပါကဤပြproblemနာကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ Flash drive ရှိအခန်းကန့်သည်ပျက်စီးနေသည် ကွန်ပျူတာမှ flash drive ကိုဖြုတ်ခြင်းမပြုမီ၊ အခန်းကန့်များပျက်စီးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသော“ Safely Remove and Hardware နှင့် Eject Media” ကို Safely Remove လုပ်ရန်ပျက်ကွက်ပါ။ ဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ် malware ပျက်စီးခြင်း။ ဗိုင်းရပ်စ်များ (သို့) malware သည် flash drive မှအရေးကြီးသောအချက်အလက်များကိုဖျက်ဆီးပစ်ပြီးပုံမှန်အားဖြင့်အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
Flash drive ရှိအချက်အလက်များသည်အရေးကြီးပြီးအချက်အလက်များကိုအရံမသိမ်းဆည်းပါကမှန်ကန်သောလွတ်မြောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သင့်သည်။ Flash drive မှအချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရယူပြီး Flash drive ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းပါ။
မှတ်ချက်။ ။ Flash drive အချက်အလက်ပြန်လည်သိမ်းယူခြင်းမပြုမီ၊ flash drive တွင် chkdsk စစ်ဆင်ရေးကိုမလုပ်ပါနှင့်၊ အကြောင်းမှာ chkdsk သည်အလွန်တရာပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းကိုသာပြုလုပ်နိုင်ပြီး၊
flash drive ကိုဖွင့ ်၍ မရသောအချိန်တွင်အချက်ပြခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းထားသည့်အချိန်တွင် Flash drive မှအချက်အလက်များကိုမည်သို့ပြန်လည်ရယူမည်နည်း။ ရှုပ်ထွေးနေပုံရသောပြproblemနာသည်အမှန်တကယ်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ သင်ယုံကြည်စိတ်ချရသော recovery software ကိုအသုံးပြု သ၍ သာမန်အသုံးပြုသူများသည် flash drive recovery data ၏ပြproblemနာကိုအလွယ်တကူဖြေရှင်းနိုင်သည်။ flash drive မှအချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကြည့်ကြစို့။
အဆင့် ၁ - ကွန်ပျူတာ flash drive ကိုကွန်ပျူတာက USB port သို့ထည့်ပါ၊ ကွန်ပျူတာသည် flash drive ကိုမှတ်မိနိုင်ပြီးကွန်ပျူတာရှိဒေတာဆယ်တင်ရေးဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်သော DiskGenius ကိုဖွင့်ပါ။
DiskGenius သည်အစွမ်းထက်သော partition စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အချက်အလက်ပြန်လည်ရယူခြင်းဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးအစွမ်းထက်သောဒေတာလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်သိုလှောင်ရေးပစ္စည်းအမျိုးမျိုးမှဒေတာဆုံးရှုံးမှုပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်
အဆင့် ၂။ DiskGenius ဆော့ဝဲ၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိ flash drive ကိုရွေးချယ်ပါ (ဤတွင်သင် flash drive မော်ဒယ်ကိုရွေးရန်လိုအပ်သည်၊ RD1 + serial number တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း) ။ ထို့နောက် "Recover File" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
မွတ္စု: Flash drive ကိုဖွင့ ်၍ မရပါ၊ ပုံစံချရန်အတွက်အချက်ပြသည်။ Flash drive ပေါ်ရှိအခန်းကန့်ပျက်စီးသွားသည်ကိုပြသည်။ အခန်းကန့်ပျက်စီးခြင်းသည်အခန်းကန့်ပျက်စီးခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ဤနေရာတွင်ပျောက်သောအခန်းကန့်များကိုရှာဖွေရန်မလိုအပ်ပါ။
အဆင့် ၃: recovery mode ကိုရွေးပြီး Start ကိုနှိပ်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည် flash drive တစ်ခုလုံးကိုနက်နက်နဲနဲစူးစမ်းလေ့လာလိုပါက "ပြီးပြည့်စုံသောပြန်လည်ဆယ်တင်မှု" နှင့် "လူသိများသောဖိုင်အမျိုးအစားများအတွက်" အပိုစကင်ဖတ်ရန် "ရွေးစရာများကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်စစ်ဆေးရန်လိုသည်၊ ထို့အပြင်ဖိုင်စနစ်အမျိုးအစားကိုသင်သိပါက Formatting မလုပ်မီ flash drive, သင်ပြAdvancedနာမတိုင်မီ flash drive ၏ဖိုင်စနစ်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ရန် "Advanced" "Options" ခလုတ်ကို နှိပ်၍ ပြန်လည်ထိရောက်မှုကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။
အဆင့် ၄ - ဖိုင်ကိုအရင်ကြည့်ပြီးပုံမှန်ဖိုင်ကိုပုံမှန်ပြန်ထားနိုင်မနိုင်ဆုံးဖြတ်ပါ။
DiskGenius သည်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်းတွေ့ရှိရသောဖိုင်များကိုစာရင်းပြုစုပြီးစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုရလဒ်များကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီမွမ်းမံလိမ့်မည်။ အသုံးပြုသူများသည်စာရွက်စာတမ်းများကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးစဉ်သို့မဟုတ်ပြီးနောက်တွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ဖိုင်ကိုကြိုတင်ကြည့်ခြင်းဖြင့်သင်ပြန်လည်ရယူလိုသောဖိုင်ကိုအလျင်အမြန်ရှာပြီး၎င်းဖိုင်သည်ပျက်စီးသည်ဟုတ်မဟုတ်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၊ အမှန်တကယ်ပြန်လည်နာလန်ထူခြင်းမပြုမီ၊ ဒေတာဆယ်တင်မှုအောင်မြင်မှုနှုန်းကိုသင်အပြည့်အဝနားလည်နိုင်သည်။
အဆင့် ၅ - လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုထုတ်ယူပါ။ သင်ပြန်လည်ရှာဖွေလိုသည့်ဖိုင်များကို scan ရလဒ်တွင်အမှတ်အသားပြုပြီး mouse ကိုညာဖက် နှိပ်၍ "Copy to Specified Folder" ကိုရွေးချယ်ပါ။ ပြန်လည်ရယူထားသောအချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းရန်နေရာတစ်ခုကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
အဆင့် ၆ - ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည့်အချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးပါ။ အကယ်၍ သင် data များကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ပြီဆိုလျှင် Flash Drive ကို format လုပ်ရန် DiskGenius ကိုသုံးနိုင်သည်။ format ချပြီးသည်နှင့် flash drive ကိုပုံမှန်ဖွင့်ပြီးဒေတာများကိုသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း အကယ်၍ သင်သည် flash drive ကိုဖွင့ ်၍ မရပါ၊ ပုံစံချရန်တောင်းဆိုလျှင်ပြtheနာကိုသင်ကြုံတွေ့ရပါကထိတ်လန့်မသွားပါနှင့် flash drive ကို format မလုပ်ပါနှင့်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်၊ Flash drive တွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုမရှိသရွေ့၊ flash drive ထဲရှိဒေတာများကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်လုံးဝပြန်လည်ထူထောင်နိုင်သည်။ Flash drive ထဲရှိဒေတာများကိုအောင်မြင်စွာပြန်လည်ရယူပါကပျက်စီးနေသောအခန်းကန့်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အတွက် Flash drive ကိုသင် format လုပ်နိုင်သည်။
flash drive ကိုမဖွင့်နိုင်ပါ၊ ၎င်းသည်ကျိုးပဲ့ခြင်းမရှိ၊ နည်းလမ်းသုံးခုသင်ပေးသည်
ယေဘုယျအားဖြင့် flash drive ၏ဖိုင်စနစ်ပျက်စီးသွားသောကြောင့်၎င်းကိုနှစ်ချက်နှိပ်ခြင်းဖြင့်ဖွင့ ်၍ မရပါ။ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုဖျက်ပစ်ရင်တောင်နှစ်ခါနှိပ်ရုံနဲ့ဖွင့်လို့မရတော့ဘူး၊ ပရိုဂရမ်ကိုဖွင့်ဖို့ရွေးချယ်တဲ့ dialog box ကိုပြလိမ့်မယ်။
ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းမှာ - flash drive ခလုတ်ပေါ်တွင်ညာခလုပ်နှိပ်ပါ - - Properties -> Tools -> Start Check -> ဖိုင်စနစ်အမှားများကိုအလိုအလျှောက်ပြင်ရန် -> Start - နှင့်ပြုပြင်မှုမကြာမီပြီးစီးလိမ့်မည်။ ဟားဟက်ဟားဟား။ ၎င်းသည်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ hard drive များအတွက်ထိရောက်ပုံရသည်။
ထို့အပြင်၊ flash drive ခလုတ်ကိုသင်နှိပ်လိုက်ပါကအများအားဖြင့်ဗိုင်းရပ်စ်၏လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည့်အလိုအလျောက်ကစားခြင်းရွေးစရာပေါ်လာလိမ့်မည်။
Autorun.inf ဖိုင်တွင်ပြproblemနာတစ်ခုရှိပါက attribute ကိုဖယ်ရှား။ ဖျက်ပစ်ပါ။ ထို့နောက် registry တွင် autorun.inf ညွှန်ပြသောဖိုင်ကိုရှာဖွေပြီး၊ ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက် shell subkey ကိုဖျက်ပါ။ ထို့နောက် D ကိုဖွင့်နိုင်သည်။ မောင်း။ Start-run ပြီး regedit (register) ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ dialog box ကိုရှာရန် "Ctrl + F" ကိုသုံးပါ။ shell subkey ကိုကြည့်ရန် autorun.inf "ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ထို့နောက် right-click-delete ကိုနှိပ်ပါ။
၁။ အခန်းကန့်တိုင်းတွင် autorun.inf ကဲ့သို့သောလျှို့ဝှက်ဖိုင်များရှိပါက၎င်းကိုဖျက်ပြီးသည်နှင့်ကွန်ပျူတာကိုပြန်ဖွင့်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
၂။ ဖိုင်အမျိုးအစားဖွင့်သည့်နည်းလမ်းကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ (ဥပမာအားဖြင့် XP ကိုယူပါ)
ကျွန်ုပ်၏ Computer-Tools-Folder Options-File အမျိုးအစားကိုဖွင့်ပြီး "Drive" (သို့) "Folder" ကိုရှာပါ။ (သင်ရွေးလိုက်သောပြonနာပေါ် မူတည်၍ သင်ရွေးလိုက်သောစကားလုံးသည်သင်နှစ်ခါနှိပ်ခြင်းဖြင့် Drive ကိုမဖွင့်နိုင်လျှင် "Drive" ကိုရွေးပါ။ "ဖိုလ်ဒါတစ်ခုကိုမဖွင့်ပါက" Folder "ကိုရွေးချယ်ပါ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော "Advanced" ကိုနှိပ်ပါ၊ Edit File Type (dialog box) တွင်၊ "New", စစ်ဆင်ရေးတွင် "open" ကိုဖြည့်ပါ (ဖွင့်ထားလျှင်၎င်းသည်အလိုအလျောက်ဖြည့်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အခြားအကျွမ်းတဝင်မရှိသူများကိုညွှန်ပြသည်။ ၎င်းတွင် Trojan horse ကိုညွှန်ပြနိုင်သည်၊ "Edit" ကို ရွေးချယ်၍၊ explorer.exe ကိုဖြည့်သွင်းပြီးစစ်ဆင်ရေးကိုပြုလုပ်ရန်အတည်ပြုပါ။ ထို့နောက် "Edit File Type" ၀ င်းဒိုးသို့ပြန်သွားပြီး "open" ကိုရွေးပါ၊ ၎င်းကို default value အဖြစ် ထား၍ အတည်ပြုပါ။ ပုံမှန်သို့ပြန်သွားပြီလားဆိုတာယခုကြည့်ဖို့အခန်းကန့် (သို့) ဖိုင်တွဲကိုဖွင့်ပါ။
Start-Run-Enter regedit ကိုရှာပါ။ HKEY_CLASSES_ROOT \_ Drive \_ shell) shell အောက်ရှိအကြောင်းအရာအားလုံးကိုဖျက်ပစ်ပါ။ Registry ကိုပိတ်ပါ။ Keyboard ပေါ်ရှိ F5 ကိုနှိပ်ပြီး partition ကိုကြည့်ပါ။
Start-Run-Enter regedit ကိုရှာပါ။ HKEY_CLASSES_ROOT \_ Directory \_ shell] shell အောက်ရှိအရာအားလုံးကိုဖယ်ရှားပါ။ Registry ကိုပိတ်ပါ၊ Keyboard ပေါ်ရှိ F5 ကိုနှိပ်ပြီး refresh လုပ်ပြီးကြည့်ဖို့ partition ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါ။
Flash drive ကိုနေရာများစွာတွင်အမြဲအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ကွန်ပျူတာအမျိုးမျိုးတွင်ဝှက်ထားသောအန္တရာယ်များရှိလိမ့်မည်။ ပြmanyနာများစွာရှိနိုင်သည်မှာမလွဲ.ကန်ဖြစ်သည်။
Flash drive သည်ဖိုင်များကိုရွှေ့ပြောင်းရာတွင်အသုံးပြုသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မကြာမီတွင်သူငယ်ချင်းများစွာသည် flash drive ကိုအသုံးပြုသောအခါ၎င်းကို double click နှိပ်၍ မဖွင့်နိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ သူငယ်ချင်းတော်တော်များများကသူတို့ flash drive ပျက်သွားတယ်လို့ထင်ကြတယ်။ တကယ်တော့ပြtheနာကိုရှာဖို့ဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်။ ပြ’sနာ ကိုကြည့်ကြစို့။ flash drive ကိုမဖွင့်နိုင်သည့်ပြtheနာကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း။
Flash drive သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းများတွင်ရုံးသုံးကိရိယာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Flash drive ကိုအသုံးပြုနေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြေအနေအချို့ကိုကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကွန်ပျူတာသည် flash drive ထဲသို့ပလပ်ထိုးသောအခါ Flash drive သည်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ဖွင့်ပြီး flash drive ကိုဖွင့ ်၍ မရပါ။ မည်သို့ဖွင့်ရမည်နည်း
Флешку не можна відкрити, як відновити втрачені файли
ஃபிளாஷ் டிரைவைத் திறக்க முடியாது, இழந்த கோப்புகளை எவ்வாறு மீட்டெடுப்பது
Pemacu kilat tidak dapat dibuka, bagaimana memulihkan fail yang hilang
플래시 드라이브를 열 수 없습니다. 손실 된 파일을 복구하는 방법
Flash drive ora bisa dibukak, cara mulihake file sing ilang
Flash-enheten kan inte öppnas, hur man kan återställa förlorade filer